DM skrini inotora aluminium mbiri yakasanganiswa yekuumba chimiro senge chidzitiro chemuviri, yakasikwa arc angle, hapana welding. Chimiro chakasimba, chinoyevedza uye chakanaka chimiro.
Ultra-chiedza uye yakanyanya-mutete muviri
Mberi 4mm yakadzikama girazi kudzivirira, guruva-uchapupu, anti-kudhumhana, kusvika IP65 nhanho yekudzivirira.
Iyo yekudyisa skrini inogona kuve yakachengeteka uye zviri nyore kubatana kune yakakwirira-kumhanya etc yekuchaja chikuva system, ine RS232, 485, RJ45, uye isina waya yekutaurirana modhi sarudzo. Kushanda kuri nyore uye kuvimbika kwepamusoro.
Q2. Ndingawanewo muenzaniso weodha ye Lane Display?